Antony 3 hanakaramana orinasa PR | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 21, 2009 Alarobia 29 Janoary 2014 Chris Lucas
Amin'ny anjara asako amin'nyFormstack , ny mpanamboatra endrika an-tserasera, iray amin'ireo asako ny manararaotra ny fifandraisana amin'ny daholobe (PR) ary ny fandrakofana manokana momba ny haino aman-jery, izay mitarika fampirantiana ary mitarika fivarotana.
Ny fananana traikefa na eo amin'ny maso ivoho na eo amin'ny lafiny mpanjifa dia azoko hoe a tsara orina Public fifandraisana afaka manao ho an'ny fikambanana. Ireto misy antony telo, avy amin'ny zavatra niainako, ny antony tokony hanakaraman'ny orinasa, ary indrindra ireo orinasa madinidinika masoivoho PR ivelany.
Tsy manam-potoana hanaovana PR ianao: Ny PR dia tsy spigot izay azonao alefa sy alefa. Toy ny asa marketing hafa ihany, ny PR tsy miova, stratejika ary azo refesina dia zavatra mila kasaina hatao ary hatao mandritra ny fotoana maharitra. Tahaka ny tsy ahafahanao mamadika SEO, ny PR dia zavatra mihamafy hatrany rehefa mametraka ezaka bebe kokoa ianao.
Mba hampitomboana ny fandefasana: Ny ankamaroan'ny orinasa dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fandefasana vokatra na serivisy vaovao amin'ny fahombiazan'ny orinasanao. PR dia mihoatra lavitra noho ny fanoratana famoahana gazety fotsiny ary apetaka amin'ny servisy tariby. Ny fananana mpiara-miasa iray izay afaka mampitombo ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery, ny media sosialy, ny hetsika, ny loka ary ny hetsika PR mifandraika amin'ny famoahana lehibe dia afaka manome anao tongotra rehefa mandefa ny vokatrao. Tadidio fotsiny, araka ny nolazaiko teo amin'ny teboka 1. PR dia tsy zavatra tokony hodiovina sy hovonoina .Raha mikasa ny hampiasa masoivoho ivelany ianao amin'ny famoahana azy dia mila mahazo antoka ianao fa manana rafitra napetraka raha vao vita ny fandefasana. tohizo ny angovo sy ny momentum natsanganao rehetra. Ny zavatra ratsy indrindra azon'ny orinasa atao dia ny mandefa vokatra lehibe, manana PR lehibe, ary manjavona nefa tsy manisy tombony ny zavatra laninao nandritra ny volana maro.
Mamelombelona ny vokatra na serivisy: Indraindray na dia ny mavens PR tsara indrindra ao an-trano aza dia mety ho lany hevitra tsara. Toy ny amin'ny marika vaovao na tranokala fananganana indray ny masoivoho ivelany hamelombelona ny PR anao dia afaka mandoa dividends be. Ny masoivoho PR tsara dia mahay mijery ny vokatra, serivisy na orinasa ary mahita zava-baovao - zavatra mendrika omena. Ny zavatra izay heverinao fa maty na reraka dia azo entina haingana any amin'ny tsena vaovao na outlet vaovao ary mahazo tongotra haingana. Ny fampiasana orinasa PR izay afaka mametaka haingana ny fifandraisan'izy ireo sy mizaha hevitra vaovao dia mety hiteraka vokatra na orinasa manjavona. Tadidio anefa fa na dia ny PR tsara indrindra aza dia tsy afaka mamelona vokatra efa ho faty, ataovy izay hahazoana antoka fa misy zavatra any ary ataovy mahitsy amin'ny maso ivoho momba ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana taloha mba hahafahan'izy ireo manome tetika mety.
Ary amin'ny maha bonus anao eto dia misy antony iray hafa hanakaramana masoivoho ivelany.
4. Ao amin'ny tsena feno olona ianao: Ireo orinasa madinidinika izay manandrana mifaninana amin'ny tsena lehibe naorina na be olona dia mety hahita tombony tsara amin'ny fananganana masoivohon'ny PR any ivelany. Ny masoivoho tsara dia afaka mamolavola paikady izay mifantoka amin'ny tanjaka sy fanavahana ny orinasanao izay mampiavaka anao. Indraindray ny masoivoho iray dia afaka manampy anao hamaky ny tabataba ary hahatratra haingana kokoa ny tsena tadiavinao.
Tsy ireo ihany no antony tokony hanakaraman'ny fikambanana maso ivoho PR fa izany no antony sasany hitako tamin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny maso mba hanakarama fanampiana ivelan'ny PR.
Tags: blastmediaprfifandraisana amin'ny vahoaka
Chris no filoha lefitry ny fampandrosoana ny orinasa Formstack. Izy dia mitantana ny ezaka marketing an'ny Formstack amin'ny fahalianana manokana amin'ny fahitana ny fomba ahafahan'ny marketing ara-tsosialy sy an-tserasera manampy ny Formstack hitombo. Formstack dia fitaovana fananganana endrika an-tserasera izay mitaky aretin'andoha be loatra amin'ny fanangonana sy fitantanana angona an-tserasera.
Ampidiro ao anaty bilaoginao WordPress ny bokotra retweet
Sep 22, 2009 amin'ny 2: 20 AM
Mahagaga ny orinasa PR. Fa tokony ho azonao tsara PR mialoha ny hanarahanao ireo vondrona ireo.
Zahao ity lahatsoratra ity: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Ary jereo ity horonantsary mahafinaritra ity:
Sep 22, 2009 ao amin'ny 12: PM PM
Hevitra tsara daholo. Tsy manam-bola hanaovana izany ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika. Fa toy ny any ambony ihany,
ny ezaka dia mila mifanaraka, stratejika ary azo refesina.
Toy izany koa amin'ny doka. Hitako ny orinasa kely manao izany imbetsaka ary mitaraina fa tsy mandeha ny doka.
Raha misafidy ny hanao azy samirery ny orinasa iray, ny fanalahidy dia ny tsy famonoana ny spigot. Tahaka ny fanosihosanao ny karipetrao isan'andro, mamafa ny arabe manoloana ny fivarotanao dia zavatra iray izay mila fijerena mitohy.
Oct 28, 2009 amin'ny 2: 33 AM
Io tokoa no vola tsara indrindra azonao atao mba hialana sasatra amin'ny varotrao. Afaka mivezivezy manaraka ny fotoana mety foana ianao, fa amin'ny ankapobeny dia tsy manana teti-bola handoavana izany rehetra izany amin'ny fomba mandaitra. Tadiavo ny strenghts anao ary mahazoa torohevitra mety ary manorena eo. Lahatsoratra tsara
Firenena PR PR Chicago
Dec 20, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Manana teboka mahafinaritra eto ianao - lahatsoratra tsara!
Jan 10, 2012 ao amin'ny 8: 13 AM
Heveriko fa afaka mifanaraka amin'ireo Chris rehetra ireo aho. Ny antony iray hafa dia holazaina hoe: 'tsia' rehefa manana hevitra ratsy ianao. Raha maso ivoho PR ara-teknika dia mahaleo tena ampy dia afaka miteny rehefa mieritreritra ny iray amin'ireo hevitrao dia tsy mandeha ary tokony ho sahy hilaza aminao.
Heveriko fa tsy mandeha intsony ny filazany fa tokony ho ampy fahaiza-mamorona izy ireo mba hamorona hevitra ihany koa!
5 Okt 2017 amin'ny 2:23 PM
Mahaliana ny mahafantatra fa rehefa misy raharaham-barotra te hanakarama orinasam-pifandraisana misy tombontsoa azo avy amin'izy ireo amin'ny fampiasana iray. Tiako ny fomba nitenenanao fa izany dia hanampy azy ireo hampitombo ny fanombohana ny orinasany na izay vokatra vaovao tadiavin'izy ireo amidy. Izany dia zavatra tokony ho ao an-tsain'izy ireo mba hahafahan'izy ireo manana ny sasany hiara-miasa amin'ny haino aman-jery amin'ny endriny rehetra.